नेपाल पनि कोरोना भाईरसको जोखिममा, प्रतिरोधात्मक माक्स समेत नपाईने डा. कोईरालाको भनाई (भिडियो सहित – " सुलभ खबर "
नेपाल पनि कोरोना भाईरसको जोखिममा, प्रतिरोधात्मक माक्स समेत नपाईने डा. कोईरालाको भनाई (भिडियो सहित
बिराटनगर । नेपालमा कोरोना भाईरस भित्रिने खतरा प्रबल रहेको र सरकारको रोकथामको तयारी पर्याप्त नभएको बिराट मेडिकल कलेजका डा. पुरु कोईरालाले बताएका छन । अहिले बिश्वमा माहामारीको रुप लिईरहेको कोरोना भाईरस नेपालमा पनि भित्रिने सम्भावना बढी भएको
भन्दै उनले रोकथामका लागी एउटा भरपर्दो माक्स समेत नेपालका सबै भेगमा नपाईने गरेको उनले बताए । केही अस्पतालमा शंकास्पद बिरामी देखिए उपचारका लागी ब्यबस्था मिलाईएको भनिएपनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको दाबी छ ।
सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नाका बन्द गरेपनि रोग बन्द गर्न नसक्ने भन्दै उनले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बताए । चीनमा मात्र सो रोगबाट अहिले सम्म ५ सय बढी मानिसहरुले ज्यान गुमाईसकेका छन । डा. कोईराला सँग कोरोना भाईरसका बिषयमा गरिएको ताजा भिडियो कुराकानी :
यो पनि असल छिमेकीको धर्म, चीनलाई एक लाख मास्क सहयोग तर विचौलियाको हालिमुहाली
काठमाडौं । चीनमा नोवेल कोरोना भाइरस संक्रमण बढिरहेको छ। नेपालको सहरी क्षेत्रमा मास्कको माग बढेको छ। यहाँ व्यक्तिगत मास्क, ग्लोब्स र ह्यान्ड सेनिटाइजरको अत्यधिक माग रहेको व्यवसायी बताउँछन्।
श्रंशु फार्मेसीका सञ्चालक शुभमान श्रेष्ठका अनुसार विगतमा मास्क खरिदकर्ताहरू फाट्टफुट्ट थिए। अहिले एउटै व्यक्तिले दर्जन बढी मास्क माग गर्छन्। उनी भन्छन, ‘हामीबाट खरिद गर्ने र बाहिर तेब्बर बढी मूल्यमा बिक्री हुन थालेको पाएपछि ठूलो परिमाणमा बेच्न छाडें।’
तीनदेखि पाँच रुपैयाँ पर्ने साधारण मास्कलाई बजारमा १५ रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको छ। नेपालमा सामान्य खालको मास्क बन्छ। त्यही मास्कको पनि माग उच्च छ। चीनबाट समेत मास्कको माग आइरहेको विक्रेता बताउँछन्। ‘बनेपास्थित विक्रेताको ठेगाना दिँदै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका एक पोलिटब्युरो सदस्यले बीस हजारसम्म मास्क मगाएका छन्’, एक युवकले नाम उल्लेख गर्ने सर्तमा भने।
बजारमा मास्कको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, काठमाडौं शाखाका महासचिव समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले पनि मागबमोजिमको मास्क पाएका छैनौं। कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ।’ औषधि व्यवस्था विभागले मास्क, ग्लोभ्स र ह्यान्ड सेनिटाइजरको पर्याप्त मौज्दात राख्न निर्देशन दिएको छ। मौज्दात नराखी निर्यात नगर्न÷नगराउन रसायन तथा आपूर्ति संघलाई निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘ती वस्तुको मौज्दातको विवरण जानकारी दिन पत्राचार गरे पनि जवाफ आएको छैन।’ तीन दिनभित्र मास्क उत्पादकको क्षमता र मौज्दातको विवरण विभागमा पठाउन अघिल्लो शुक्रबार पत्राचार गरे पनि आपूर्ति संघले विवरण पठाएको छैन।
विभागले खुद्रा बिक्रीवितरण गर्दा नियन्त्रित रूपमा गर्न र मुलुकभरि उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो। मूल्य नबढ्ने गरी बिक्रीवितरण नगर्न÷नगराउन अनुरोध गरिएको महानिर्देशक ढकालले बताए।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार मास्क निर्यातमा रोक लगाउन अध्यागमन र भन्सार विभागलाई निर्देशन दिइएको छ। ‘कृत्रिम अभाव र कालोबजारी गरेको थाहा पाए कारबाही हुन्छ’, श्रेष्ठले भने।
चीनलाई एक लाख मास्क सहयोग नोवेल कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च रहेको चीनमा मास्क अभाव भएपछि सरकारले एक लाख प्रोटेक्टिभ मास्क उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको विशेष बैठकपछि उक्त निर्णय गरिएको हो। नेपालले एक लाखको संख्यामा प्रोटेक्टिभ मास्क चीन सरकारलाई सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए। अाजकाे अन्नपूर्ण पाेस्ट दैनिकमा खबर रहेकाे छ ।
खाना खाएको २ घण्टासम्म यी ६ कामहरु नगर्नुहोस नत्र ….
एजेन्सी। खाना खाएपछि धेरैको आराम गर्ने, आनन्द लिने बानी हुन्छ। तर विभिन्न अनुसन्धान अनुसार खाना
जाडो महिनामा अम्बा खानु हुन्छ फाइदै-फाइदा !
अम्बा फल स्वादिष्ट हुनुका साथै निकै गुणकारी पनि हुन्छ। ज्वरो, अम्लता, कब्जियत आदिमा अंबा सेवन
जाडोमा अनुहार फुट्ने समस्याबाट यसरी पाउनुहोस् छुटकारा !
जाडो मौसममा छाला सुख्खा हुने र फुट्ने समस्या बढ्छ। छाला रुखो हुन्छ। यदि सुख्खा छालाको
कुनै ठूलो रोगले अचानक कसैको शरीरमा कब्जा गर्दैन। शरीरमा थुप्रै संकेत देखा पर्छन्। घाँटीको क्यान्सर
एजेन्सी । पहिला डाक्टरहरुले ४० वर्ष कटेपछि पुरुषहरुलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा ध्यान दिन आग्रह गर्थे ।तर